Showing posts with label နိုင်ငံတကာ. Show all posts
မြောက်ကိုရီယား ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေလား ?
ဇေယျာသူရ1:33:00 AM မြောက်ကိုရီယား ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေလား ၁၅-၂-၂၀၁၇ ကင်ကျုံနမ်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလမ်...Read More
ကင်ဂျုံအန်းအစ်ကိုအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီး ၂ ဦး၏ စီစီတီဗွီမှတ်တမ်း ထွက်ပေါ်
ဇေယျာသူရ2:55:00 AM မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကင်ဂျုံနမ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က မလေးရှာ...Read More
ချစ်သူများနေ့ကို faတွေနဲ့rsတွေ ဖြတ်သန်းဗွီဒီယိုဖိုင်ပြံ့နှံ့
ကျပ်သိန်း (၃၀)ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်သည့် သူတောင်းစား ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
ဇေယျာသူရ1:19:00 AM ကျပ်သိန်း (၃၀)ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်သည့် သူတောင်းစား ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ၂-...Read More
Tattoo တွေအပြည့်နဲ့ ဆားဘီယန်း တော်ဝင်မျိုးနွယ်များရဲ့ ရှေးဟောင်းရုပ်အလောင်းနှစ်ခု ... -------------------------------------------
ဇေယျာသူရ1:08:00 AM Tattoo တွေအပြည့်နဲ့ ဆားဘီယန်း တော်ဝင်မျိုးနွယ်များရဲ့ ရှေးဟောင်းရုပ်အလောင်းနှစ်ခု ... ...Read More
သက်တမ်းကုန် အနှိပ်ခန်းရဲဝင်ဖမ်း မြန်မာနိုင်ငံသူများပါဝင် =========================
ဇေယျာသူရ6:01:00 AM သက်တမ်းကုန် အနှိပ်ခန်းရဲဝင်ဖမ်း မြန်မာနိုင်ငံသူများပါဝင် ========================= ဘန်ကောက...Read More
foot ball live ဘောလုံး တိုက်ရိုက်တင်ဆက်သည်
ဇေယျာသူရ9:21:00 AM အဆင်မပြေရင် ဒီလင့်ထဲကနေ ဝင်ကြည့်ပါ http://www.livefootball.com Read More
ဘောလုံးကန်ရင်း နိုင်ငံတကာမှာ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းဆိုရင်း သမိုင်းထွင်ကျန်သူများ
မီးနီဖြတ်မောင်းသည့် လူနာတင်ယာဉ်နှင့် ပြိုင်ကားတစီး ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်မိ (ရုပ်သံ) ဇေယျာသူရ1:37:00 AM ရုရှားနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း လမ်းမတခုပေါ်မှာ ပြိုင်ကားတစီးနဲ့ လူနာတင်ကားတစီး ဟာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်...Read More
မီးနီဖြတ်မောင်းသည့် လူနာတင်ယာဉ်နှင့် ပြိုင်ကားတစီး ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်မိ (ရုပ်သံ) Reviewed by ဇေယျာသူရ
မြွေလူသားမိန်းကလေး ၂ လနီးပါးတခါ အရေခွံလဲ (ရုပ်သံ)
ဇေယျာသူရ7:29:00 PM မြွေလူသားဆိုတဲ့ ဆက်စပ်ချက်အရ အရမ်းကိုဖြစ်ခဲလှတဲ့ အခြေအနေမျိုးတခုနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတဦးဟာ ၂ လ...Read More
ပေါက်ကွဲမူ့များ စုစည်းထားသော ဗွီဒီယိုဖိုင်များ အသက်ငယ်သူများလုံးဝမကြည့်ရ
နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပွဲတွင် အကြမ်းစား ဘောလုံးပွဲများ စုစည်းထားမူ့
ကိုရီးယားက မြန်မာနိုင်ငံ ကို လာရိုက်သွားသောဗီဒီယိုဖိုင် လူကြည့်များ
မိခင်ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှ လက်ပြနေသည့်ကလေးငယ် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် ရုပ်သံဗွီဒီယို ထွက်ပေါ် ဇေယျာသူရ3:48:00 AM ၁၆ ပတ် အသက်အရွယ်ရှိတဲ့ မမွေးဖွားသေးတဲ့ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲက ကလေးက မိဘတွေကို လက်ပြနေတာနဲ့ ပိ့က်ကဘူ...Read More
မိခင်ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှ လက်ပြနေသည့်ကလေးငယ် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် ရုပ်သံဗွီဒီယို ထွက်ပေါ် Reviewed by ဇေယျာသူရ
၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားနဲ့ ကာမစပ်ယှက်ခဲ့လို့ မိအေးနှစ်ခါနာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းဆရာမ ဇေယျာသူရ9:04:00 PM ဒါးလက်စ်မြို့မှ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားနဲ့ ပက်သက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးကို အဆိုပါ ကျောင်းသားကေ...Read More
၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားနဲ့ ကာမစပ်ယှက်ခဲ့လို့ မိအေးနှစ်ခါနာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းဆရာမ Reviewed by ဇေယျာသူရ
အမှန်တကယ်လူကြည့်များသည့် ဗွီဒီယိုအရှည်များကို Facebook မှ ဆုချီးမြှင့်မည် ဇေယျာသူရ8:58:00 PM ဒီနည်းလမ်းသစ်အရ ကြည့်လိုက်တဲ့ ဗွီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကြည့်ရှုမှုရာခိုင်နှုန်းအလိုက် လူကြိုက်များမမ...Read More
အမှန်တကယ်လူကြည့်များသည့် ဗွီဒီယိုအရှည်များကို Facebook မှ ဆုချီးမြှင့်မည် Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဇေယျာသူရ2:09:00 AM အပြာကားမင်းသမီးအဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့သူဟာ အခုတော့ အီတလီဘောလုံးအသင်းရဲ့ စီမံခန့်ခွဲသူ ဖြစ်လာပါ...Read More
တိရိစ္ဆာန်နှင့် လူ မေထုံမှီဝဲမှုကို ဗြိတိန် အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ချမှတ်လိုက်သည်ဟုဆို ဇေယျာသူရ1:59:00 AM ယင်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ညဉ့်အတော်နက်သည်အထိ ဆွေးနွေးငြင်းခုန် ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်...Read More
တိရိစ္ဆာန်နှင့် လူ မေထုံမှီဝဲမှုကို ဗြိတိန် အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ချမှတ်လိုက်သည်ဟုဆို Reviewed by ဇေယျာသူရ
မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုအကြွေးဖြင့်သိမ်းကာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်အသွင်းပြောင်းခဲ့တဲ့ဗေဒင်ဆရာမ ဇေယျာသူရ1:27:00 AM ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရှေ့ဖြစ်ဟောဗေဒင်ဆရာမတစ်ယောက်ဟာ အကြွေးရရန်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပြည့်တန်ဆ...Read More
မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုအကြွေးဖြင့်သိမ်းကာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်အသွင်းပြောင်းခဲ့တဲ့ဗေဒင်ဆရာမ Reviewed by ဇေယျာသူရ